Aasaaska Qoyska | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamuud Axmed Muuse — September 12, 2019
Dhisidda guriga waxay ubaahan tahay cilmi iyo caqli wada jira, waayo aragmimo iyo oolimaad badan, feker iyo ka fiirsasho badan, tijaabo iyo turxaan bixin badan, talo iyo tusaalooyin badan, tabar iyo tab.
Asaaska qoys wanaagsan waa tiir kamida tiirarka adduunku ku dhisan yahay, haddii uusan jireena cidi dunida kor keeda joogteen. Dunida markii Alle uumay waxa uu ku dhex uumay waxa mood iyo nool dunida korkeeda yaal. Nabi Aadan NNKH, waxa la keenay dunida korkeeda isaga oo keligii ah, aan qofna wehelin. Alle ayaa feertiisa ka uumay lammaanihiisa Xaawo, oo ah halka laga soo fircamay hooyo Xaawo iyo aabbe Adaan. Ujeedka looga uumay ayaa ahayd in adduunku uu siijiro, si loo helo quruumo ku noolaada dunida korkeeda.
Laga soo bilaabo Xaawo iyo Aadan, waxaa dunida ku baahay wixii ka farcamay labada addoon, ilaa maanta ay dunidu ku dhisantahay dawyowgii kala duwanaa ee dunida daafaheeda ku kala nool.
Marka la rabo in la dhiso qoys ama guri waxaa asaas u ah in lagu dhiso Diin. Haddii gurigaa lagu dhiso diinta, waxaa hubaal ah in uu noqdo hoy Alle raali kayahay jiritaankiisa. Guriga waxaa udub dhexaad u ah marwo suuban, diin, akhlaaq, dabeecad, dhowrsanaan leh.
Ku dhaqanka diinta Islaamka ayaa asal u ah jiritaanka iyo horumarka qoyska.
Waxaan soo qaadanaynaa xadiiskii uu soo wereyay abuu Hurayra Alle raali haka noqdee.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
Rasuulkeena suuban wuxuu yiri: Afar baa haweeneyda loo guursadaa; Maalkeeda, Quruxdeeda, Nasabkeeda iyo Diinteeda, balse ku dadaal midda diinta leh.
Sida ku cad xadiiskaan waxaa uu ina farayaa in aan ku dadaalno tan diinta usaaxiibka ah, dabeecadda leh, samirka badan. Waxayna cadaynaysaa tani in ay tahay quruxda qoyska in ay ku jirto Guri lagu xuso xuska Alle, lagu oogo salaadihiisa, awaamiirtiisa oo dhan.
Adduunka waxa ugu kheyr badan guri wanaagsan. Sacaadada aadanaha waxa ugu kheyr badan saddex ruuxa hela; Marwo suuban, daabad suuban iyo guri waasic ah, waxaana ugu xun: Marwo xun, daabad xun iyo guri xun.
سعادة لابن آدم ثلاث ، وشقاوة لابن آدم ثلاث ، فمن سعادة ابن آدم : الزوجة الصالحة ، والمركب الصالح ، والمسكن الواسع ، وشقوة لابن آدم ثلاث : المسكن السوء ، والمرأة السوء ، والمركب السوء ) صحيح الجامع السيوطي / الألباني
Abwaan Soomaaliyeed oo tilmaamaya marwada suuban wuxuu yiri:
Marwo suuban mirihii jannaa lagu mataalaaye
Majo waxay ulaab maan halku madaxu yaalaaye.
Liibaanta qoyska waa nolosha barkeeda, waana furaha liibaanta adduun iyo midda aakhiro. Adduunyadu waa raaxo, raaxana waxa ugu kheyr badan haween saalixad ah.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة )) رواه مسلم.
Si kastaba ha ahaate arrimaha qoyska waxaa bud dhig u ah haween wanaagsan, haddii guriga laga waayo hooyo diinleh waxa uu noqonayaa gidaar iska dhisan.
Aynu ku dhisto gurigeena diin, si uusan u soodumin, una burburin, gidaar adag iyo xeyndaab looga dhigo diin iyo akhlaaq suuban.
Akhlaaqda suubanna waa sareedada adduunka.
Alle wuxuu qur’aanka ku yiri:
Waxaa kuu sugnaatay akhlaad teeda ugu wanaagsan.
Mar uu Rasuulku ka hadlaayay Akhlaaqda wuxuu yiri:
Aniga wax kale la iima soo saarin, waxaa la ii soo diray inaan dhamaystiro akhlaaqda teeda ugu fiican.
Akhlaaqda waa tiir kamida tiirarka qoysku ku dhisan yahay. Waana waajib in qofkasta oo muslim ah lahaado akhlaaq.
Ruuxa ku sifooba akhlaaq xumo waxa daliil u ah in uu yahay ruux aan lahayn diin. Waxaana ka maqan qeyb ka mida waxyaabihii uu kaga duwanaa gaalka aan diinta haysan.
Dabeecadda iyo hadalka dabacsani waxay ka mid tahay nolosha aadanaha iyo tan qoyska. Qofka waxaa laga rabaa in uu u furfurnaado ruuxa walaalkiis ah, una dhoola cadeeyo.
Nabigu isaga oo ka hadlaya dhoola cadeynta waxa uu yiri:
Walaalkaa oo aad wajigiisa u dhoolacadaysaa waa sadaqo.
Ma qiyaasi karta adoo ruux dhiban, mid murugaysan, ama xaalad adduun ku jira ama welwel ku jira in taad si xariisleh ula hadasho kadibna aad u dhoola cadayso, farxad intee leeg ayuu dareemayaa qofkaas?
Adoo gurigaaga jooga intaad xaaskaaga u yeerto oo aad la kaftanto, farxad iyo dhunkasho isugu darto, kadibna aad u dhoola cadayso ma qiyaasi kartaa farxad intee le’eg ayay dareemaysaa qoftaas?
Ma dareemi karta inta ilma yar gacanta soo qabato, madaxa usalaaxdo, dhunkato, kadibna aad u dhoola cadayso heerkee ayay gaaraysaa farxadiisa?.
Naxariisashada iyo kalgacalka aad umujiso dadka kugu xeeran, waxay kuu sahlaysaa in aad qalbigooda hanato si dhab ah, waxaa kugu dayanaya dadka wanaagsan iyo kuwa xun.
Alle wuxuu qur’aanka ku yiri;
. لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِك
Haddii aad ahaan lahayd mid qalbi adag oo dabci xun dadku agtaada way ka yaaci lahaayeen.
Dhammaan inta aan ka soo sheekeynay, waxay bud dhig uyihiin asaaska qoyska iyo dhisidda guri wanaagsan.
Jaceylka qoyska waa dareen naxariis, ixtiraam, ka fikir iyo doonista waxa fiican. Qofka raba in uu jaceyl ku dhiso gurigiisa dhidibadana ugu aaso waa in uu mar walba xaaskiisa ugu soo celceshaa ereyada naxariista leh, dareenka goonidana ku dhisanyahay.
Jacaylka ayaa sidiisaba lagu tilmaamaa ilma aragtay ugudba unugyada dhiiga iyo xubnaha kale ee jidhka. Wuxuu ufidaa sida ay ufidaan laamaha geedaha cagaaran marka ay helaan biyo iyo qorax ku filan.
Waxa uu ka abqaalmaa ilmada katimaada mataanka lammaanaha. Sida aan ku qeexnay jacaylka ayaa gurigana waxa uu ku dhisan yahay jacayl, naxariis iyo muxubi haddii lawaayana waxa uu la mid yahay sida waadi biyo beelay oo ingagay.
Alle mar uu ka hadlaayay qoyska, jacaylka, muxubada iyo naxariista, daganaashaha qoyska waxa uu yiri:
Sida ku cad aayadaan waxay ina faraysaa in qoysku yahay meesha lagu dago, lagu nasto, qofka marka uu soo wareero ama shaqo adag ka yimaado marka uu gurigiisa yimaado waxa uu dareemaa daganaasho iyo farxad. Allena waxa uu dhexdhigay qoyska jaceyl, naxariis ku dheehantahay, si laysugu soodhawaato layskuna jeclaado.
Tags: ASAASKA QOYSKA
Next post Habeenka Aqal Galka
Previous post Maxaa Keena Qoys Burburka?